Micro-oge na ahịa ndị njem | Martech Zone
Monday, August 24, 2015 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Marketinglọ ahịa na-ere ahịa n'onlinentanet na-aga n'ihu na-enwe ọganihu n'inye nkà na ụzụ nke na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịkọ ma na-enye ụzọ iji nyere ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ aka ịgbanwe. Anyị emeela ụfọdụ echiche ruo ugbu a. Isi okwu nke personas na ahịa dị egwu dị ọtụtụ karịa ma na-agbanwe agbanwe karịa ka anyị siri chee.
Cisco enyela nyocha na ngwaahịa a zụrụ nwere ihe karịrị 800 njem ndị ahịa dị iche iche na-eduga na ya. Chee echiche banyere mkpebi nzụta gị na otu ị ga-esi bido n’etiti nyocha, ịntanetị, in-store, email, ọchụchọ na usoro ndị ọzọ ka ị na-aga n’iru ime mkpebi. Sịkwa ihe mere ndị ọkachamara n'ahịa na ịzụ ahịa na-agbasi mgba ike na njiri mara nke ukwuu. Ọ bụkwa ihe ọzọ kpatara omni-ọwa ahịa ekwesịrị iji nlezianya dozie ya iji melite nsonaazụ.
Ọ bụrụ n ’ị nwere ike ịkọ ma nye ọganiihu nke na-aga njem onye ahịa, ị nwere ike belata esemokwu ahụ ma duga ha nzụta nke ọma. N'ezie, nyocha sitere na Cisco na-egosi na ndị na-ere ahịa na-enye Intanet nke Ihe Niile ahụmahụ nwere ike ijide mmelite uru nke 15.6.
Jikọta ihe ndị a Jiri Google Micro-obere oge chee echiche nyocha ma anyi nwere obere oge 4 nke onye ahia obula kwesiri ilebara anya:
Achọrọ m ịma oge - 65% nke ndị na-eri ihe n'ịntanetị na-eleba anya na ozi ịntanetị karịa afọ ole na ole gara aga. 66% nke ndị ọrụ smartphone na-ele anya ihe ha hụrụ na azụmahịa telivishọn.
Achọrọ m ịga oge - 200% na-abawanye na ọchụchọ “dị m nso” na 82% nke ndị ọrụ ama ama na-eji injin ọchụchọ iji chọọ azụmahịa mpaghara.
Achọrọ m ime oge - 91% nke ndị ọrụ ama ama na-atụgharị na ekwentị ha maka echiche mgbe ha na-arụ ọrụ na ihe karịrị 100 nde awa nke otu esi-ọdịnaya elere anya na Youtube ruo ugbu a afọ a.
Achọrọ m ịzụta oge - 82% nke ndị ọrụ ekwentị na-enyocha ekwentị ha mgbe ha nọ n'ụlọ ahịa na-ekpebi ihe ha ga-azụ. Nke a emeela ka mmụba 29% na ọnụego mgbanwe ntụgharị na afọ gara aga.
Ọ bụ ezie na Google na-elekwasị anya na onye ọrụ mkpanaka, ị ga-amata otú nke a si emetụta njem ndị ahịa ọ bụla - site na nnweta iji nweta nsogbu ma ọ bụ na-emezigharị. Nke bụ eziokwu bụ na anyị ga-aka mma banyere ịchebe ọdịnaya na-eme ka ịzụta oge mkpebi. Tinye ndi mmadu mmụta ekwekọghị na ọcha na-akpali a zuo na ọ bụ ihe ijuanya mere ndị ahịa ji agbasi mgba ike iwepụta ọdịnaya nke na-eme mgbanwe. Nchịkọta anaghị enye nghọta n'ime ihe ndị a ma ọ bụ ya mere ndị na-ere ahịa ọdịnaya ji achọ ileba anya na ha azịza iji kọwaa ma tụọ arụmọrụ nke ọdịnaya ha.
Tags: AttributionCiscocontent Marketingmgbanwenjem ndị ahịaAchọrọ m ịzụtaAchọrọ m imeAchọrọ m ịlaAchọrọ m ịmaobere ogemicromomentschee na Google